Maxaa Maanta Hirshabeelle Kasoo Cusboonaaday? | XORRIYA NEWS
Home Siyaasadda Maxaa Maanta Hirshabeelle Kasoo Cusboonaaday?
Ilo xogagaal ah ayaa sheegaya in maalmaha soo socda ay Jowhar gaarayaan wafdi balaaran oo uu horkacayo madaxweyne ku xigeenka Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Xuseen Guudlaawe oo raadinaya madaxweynaha maamulkaasi ee afarta sano ee soo socota.
Walow shalay Gudoomiyaha barlamaanka Hirshabeelle Sheekh Cismaan Barre Maxamed uu gaaray magaaladda Jowhar waxaana socdaalkiisa ku wehlinaayay Gudoomiyaha Gobolka Shabeelaha dhexe Axmed Mayre Makaraan, Wasiiro iyo Xildhibaano ka tirsan Baarlamaanka Hirshabeelle oo mudo xileedkoodu dhamaaday.
Durba waxa ay magaaladda ka bilaabeen kulamo looga arinsanayo arimaha doorashooyinka Shirshebeelle, waxaana halkaasi ku sugan guddiga soo xulista baarlamaanka 2 aad ee Hirshabeelle oo dhawaan shaaciyay jadwalka codaynta golaha wakiiladda maamulkaasi.
Magaaladda Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellaha dhexe waxaa ka socda diyaar garowga doorashada xildhibaanada 2 aad ee dowlad-goboleedka Hirshabeelle iyada oo ay halkaasi kusii qolqolyaan wufuud kale duwan oo ka soo baxay magaaladda Muqdisho ee caasimadda wadanka.
Hirshabeelle ayaa la aasaasay October 9, 2016, waxaana madaxweynihii koowaad ee DG loo doortay Cali Cabdullaahi Cosoble October 17, 2016, hayeeshee xubno kamid ah Baarlamaan-goboleedka Hirshabeelle ayaa sheegay in ay xilka ka qaadeen Cosobla e August 14, 2017 sidaas awgeed muran dheer kaddib Baarlamaanka ayaa Maxamed Cabid Waare waxa uu u doortay in uu noqdo madaxweynaha beddelaya Cosobole September 16, 2017.